Waqtigii Salman Khan U Gacan Qaadey Subhash Ghai, Laguna Qasbey Subaxii Xigey Inuu Raali Geliyo! - Hablaha Media Network
Waqtigii Salman Khan U Gacan Qaadey Subhash Ghai, Laguna Qasbey Subaxii Xigey Inuu Raali Geliyo!
HMN:- Salman Khan ayaa wareysi horey ku sheegey inu weligis gacan u qaadey Director Subhash Ghai kaliya. Salman ayaa lagu yaqaana inuu yahay hadal heynta Bollywood ka inta badan asigoo dad badan fahamsan yihin inu yahay qof marar badan barta kaga jiro fashilaada.
Inkasto warbaahinta ka sheegen inu gacan qaad ku sameeye saaxibadiisa soo maren oo ay kamid tahay Aishwarya Rai Bachchan, Salman Khan ayaa sheegey marka kaliya uu gacan qaad sameeye iney eheyd Director Subhash Ghai. Waxu sido kale sheegey inu cafis weydiistey Director ka.
Salman iyo filim sameeyaha Subhash Ghai aya mudo dheer xeriirkoda xuma kadib inta ey wada shaqeen dhex marin 2008 da filimka Yuvvraaj.
Wareysi uu siiyey shabakad caan ah sanadi 2012 ayaa Salman la weydiiye inu gacan qaad u geestey Aishwarya. Salman ayaa sheegey “Maya. Wax gacan qaad ah kuma sumeynin. Run ahanti weligey hal mar ayan gacan qaad sameeye waxuna ahaa Subhash Ghai. Subaxi xigtane wan raali geliye”
“Aniga ayaa gacan qaad la igu sameeya, taasi aya ugu wacan iney dad badan iga cabsanin. Aniga darbiga madaxa wan isaga garaaca. Waan is dhaawaca lakinse dadka dhaawac uma geesti.”
Waxuu faah faahin dheeri ah ka bixiye sababta ka dambeyse gacan qaad ka Director ka uu ula kacay “Waxa dhacdo mararka qaar inaad xadka ka baxdo. Ninkaasi qaado ayuu igu soo tuurey, saxan ayuu wajiga iiga dhufan gaarey, kadib maxa dhacay? subaxi dambe waan raali geliye. “
Subhash Ghai ayaa sido kale ka hadley dhacdadaasi. “Maalintasi waxey ehed malin xun. Aad ayan u caroodey anigo murugeysan ayaan guriga ku soo laabtey. Subaxi xigey ayaa Salim Khan i sharfey asigoo telefoon iiso direy wuuna iraali geliye. Hal sac kadib waxuu guriga iigu soo direy Salman. Wuu iso hor istaagey sida canug yar oo fahmey qaladkisa. Kadib heshiis ayaa dhacay.” Director Subhash Ghai aya intaasi ku darey hadalkiisa.
Warbixintaan Waxaa Soo Diyaariyay Soona Turjumay Yahye Yusuf